Isbeddellada Suuqgeynta Dijital ah & Saadaasha | Martech Zone
Taxaddarrada ay sameeyeen shirkaduhu intii ay socdeen aafadu waxay si weyn u carqaladeeyeen silsiladda sahayda, habdhaqanka iibsashada macmiilka, iyo dadaalladeenna suuqgeynta ee la xiriira dhowrkii sano ee la soo dhaafay.
Fikradayda, macaamilka iyo isbeddellada ganacsi ee ugu weyn ayaa ka dhacay dukaamaysiga onlaynka ah, bixinta guriga, iyo lacag -bixinnada mobilada. Suuqgeeyayaasha, waxaan aragnay isbeddel weyn oo ku soo noqoshada maalgashiga tiknolojiyadda suuqgeynta dhijitaalka ah. Waxaan sii wadnaa inaan wax badan qabanno, kanaalno badan iyo dhexdhexaadiyayaal, oo aan haysanno shaqaale yar - waxay naga rabaan inaan si xoog leh ugu tiirsanaanno tiknoolijiyada si aan u cabbirno, u cabbirno, oo aan si dijital ah ugu beddelno ururradeenna. Focus of transformation wuxuu ku saarnaa otomaatiga gudaha iyo waayo -aragnimada macaamiisha dibadda. Shirkadihii awooday inay si dhaqso ah ula qabsadaan oo ula qabsadaan waxay arkeen koror muuqda oo ku yimid saamiga suuqa. Shirkadaha aan weli la halgamin inay dib u helaan saamigii suuqa ee ay lumiyeen.
Furitaanka Isbeddellada Suuqgeynta Dijital ah ee 2020
Kooxda ku sugan M2 On Hold ayaa ku shubtay xogta waxayna soo saartay xog -ururinta oo diiradda saareysa 9 isbeddello oo kala duwan.
Suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa si joogto ah u kobcaysa maadaama ay tahay mid ka mid ah warshadaha ugu dhaqsaha badan adduunka. Iyada oo ay taasi jirto, ayaa isbeddellada cinwaanku soo baxayaan oo na tusayaan xoogagga muhiimka ah ee suuqa wada. Boggan wuxuu dib u soo celinayaa saadaasha isbeddelka ee 2020 oo leh hage tixraac xog -ogaal ah. Dhinacyada tirakoobka iyo xaqiiqooyinka, aan eegno sagaalkii isbeddel ee 12 -kii bilood ee la soo dhaafay guud ahaan aaladaha, teknolojiyadda, ganacsiga, iyo soosaarka nuxurka.
M2 On Hold, 9 Isbeddellada Suuqgeynta Dijital ah ee 2020
Shukaansiga AI-Awoodda Leh - Mashruucyada Gartner ee sheekaduhu awood u yeelan doonaan 85% is -dhexgalka adeegga macaamilka iyo macaamiisha ayaa si fiican ula qabsanaaya, iyagoo qaddarinaya adeegga 24/7, jawaab degdeg ah, iyo saxnaanta jawaabaha fudud ee su'aalaha. Waxaan ku dari lahaa in shirkado casri ah ay qaataan kootooyin wada sheekeysi ah oo si aan kala go 'lahayn ugu wareejinaya wada hadalka qofka ku habboon gudaha si meesha looga saaro jahawareerka waayo -aragnimada.
waxkabadalka - Waa dhammaaday maalmihii Gacaliye %% Magaca Koowaad %%. Iimaylada casriga ah iyo aaladaha farriimaha qoraalka ayaa bixiya otomaatigyo ay ka mid yihiin kala -qaybin, nuxur saadaalin ah oo ku saleysan xogta hab -dhaqanka iyo tirakoobka dadka, iyo ku daridda sirdoonka macmalka si loo tijaabiyo loona hagaajiyo farriinta si otomaatig ah. Haddii aad wali isticmaaleyso dufcadda oo aad qarxinayso hal-ka-badan suuq-geynta, waxaad ka luminaysaa tilmaamaha iyo iibinta!
ECommerce -ka hooyo ee Warbaahinta Bulshada - (Sidoo kale loo yaqaan Ganacsiga Bulshada or Dukaameysiga Dhaladka ah) Macaamiishu waxay rabaan waayo -aragnimo aan kala go 'lahayn waxayna ku jawaabaan doollar marka maroojinta beddelidda ay tahay mid aan xuduud lahayn. Ku dhawaad ​​goob kasta oo warbaahinta bulshada ah (ugu dambaysay TikTok) wuxuu isku -darayaa aaladaha ecommerce -ka awooddooda wadaagga bulshada, isagoo u oggolaanaya ganacsatada inay si toos ah uga iibiyaan dhagaystayaasha iyagoo adeegsanaya aaladaha bulshada iyo fiidiyaha.
GDPR Goes Global - Australia, Brazil, Canada, iyo Japan ayaa hore u ansixiyay xeerarka asturnaanta iyo xogta si looga caawiyo macaamiisha hufnaanta iyo fahamka sida loo ilaaliyo xogta shaqsiyeed ee theri. Dalka Mareykanka dhexdiisa, California ayaa gudbisay Sharciga Qarsoodiga Macaamiisha ee Kaalifoorniya (CCPA) Sannadkii 2018. Shirkaduhu waxay ku qasbanaadeen inay la qabsadaan oo qaataan nabadgelyo dhammaystiran, kaydinta, daahfurnaanta, iyo kontaroolada dheeraadka ah ee barahooda internetka iyagoo ka jawaabaya.
Voice Search - Raadinta codka ayaa laga yaabaa inay ahaato kala badh dhammaan raadinta khadka tooska ah iyo raadinta codka ayaa ka ballaarisay aaladahayaga mobilada ilaa ku hadlayaasha caqliga leh, telefishannada, baararka dhawaaqa, iyo aaladaha kale. Kaaliyeyaasha dalwaddu si aad iyo aad u sax ah ayay u helaan natiijooyinka ku saleysan goobta, shaqsiyeedka. Tani waxay ku qasbeysaa ganacsiyada inay si taxaddar leh u ilaaliyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin, abaabulaan, oo u qaybiyaan meel kasta oo nidaamyadan galayaan.
Fiidiyowga Foomka Dheer - Feejignaan gaaban waa khuraafaad aan sal iyo raad toona lahayn oo laga yaabo inay si weyn u dhaawacday suuq -geyn sannadihii la soo dhaafay. Xitaa aniga ayaa ku dhacay, anigoo ku dhiirrigelinaya macaamiisha inay ka shaqeeyaan soo noqnoqoshada xogo kooban. Hadda waxaan kula talinayaa macaamiishayda inay si taxaddar leh u naqshadeeyaan maktabadaha maadada oo si wanaagsan loo habeeyay, oo dhammaystiran, oo ay bixiyaan dhammaan faahfaahinta lagama maarmaanka u ah inay u sheegaan iibsadayaasha. Fiidiyowgu kama duwana, macaamiisha iyo iibsadayaasha ganacsigu waxay cunaan fiidiyowyo dhaafaya 20 daqiiqo!
Suuqgeynta Barnaamijyada Fariinta - Sababtoo ah waxaan had iyo jeer isku xirannahay, farriinta waqtiga habboon ee farriimaha khuseeya waxay horseedi kartaa ka -qaybgal kordhay. Hadday tahay app moobiil, ogeysiiska biraawsarka, ama ogeysiisyada goobta… farriinta ayaa la wareegtay sidii isgaarsiinta waqtiga-dhabta ah ee aasaasiga ah.
Xaqiiqada Kordhay iyo Xaqiiqada Virtual - AR & VR waxaa lagu daraa barnaamijyada moobiilka iyo khibradaha macmiilka biraawsarka oo buuxa. Haddii ay tahay duni dalwad ah oo aad kula kulmi doonto macmiilkaaga xiga ama aad si wadajir ah u daawaneyso fiidiyaha…
Sirdoonka Artificial - AI iyo barashada mashiinka ayaa ka caawinaya suuqleyda inay si otomaatig ah u shaqaysiiyaan, u shaqsiyeeyaan, oo u wanaajiyaan khibradaha macmiilka sidii hore oo kale. Macaamiisha iyo ganacsatadu waxay ka sii daalayaan kumanaan farriimo suuqgeyn ah oo maalin walba lagu riixayo. AI waxay naga caawin kartaa inaan gaarsiinno farriimo aad u xoog badan, soo jiidasho leh marka ay saamaynta ugu badan leeyihiin.
Infographic -kan hoose, ka hel sagaalka isbeddel cinwaan ee laga bilaabo 2020. Tilmaan -bixiyahan wuxuu daaha ka qaadayaa sida isbeddelladaani u saameeyaan suuqa iyo fursadaha kobaca ee ay hadda soo bandhigaan.
Tags: aiwaa chatbotssirdoonka macmalsheekooyinkaisbeddellada suuqgeyntaemail isbeddellada suuqgeyntaFacebookinfographicisbeddelada otomaatiga suuqgeyntaisbeddelada suuqgeyntaisbeddellada wareegadukaamaysiga hooyofarsamaynta luqadda dabiiciga ahnlpshakhsi ahaaneedshakhsi ahaaneedPinterestbooska2Saadaalintashaqsiyeyn la saadaalin karoqaybintasnapchatganacsiga bulshadawarbaahinta bulshadaisbeddellada warbaahinta bulshadaTikTok
Mawduucani wali ma shaqeynayaa 2021?
Agoosto 25, 2021 saacaddu markay ahayd 12:21 PM
Hi John, waxaan u malaynayaa in isbeddellada 2014 ay si daacadnimo ah hadda ugu weyn yihiin, oo ay hore u sii kaxeeyeen dadka ka shaqeeya guriga iyo ka adeegashada aaladaha gacanta.
Waxaad igu dhiirrigelisay inaan cusboonaysiiyo qoraalkan 2021 -ka oo leh xog -ururinta weyn iyo faahfaahinta M2 On Hold.
Nov 3, 2021 at 6: 29 AM
aad u fiican oo fahansan mudane. aad baad u mahadsantahay… waxaan rajaynaynaa inaan wax badan kaa barto